मेयर चाैधरीकाे फेरि अर्काे फण्डाः टेलिभिजन पत्रकारलाइ यस्तो अपशब्द भनेपछि… – KHABAR TIME
Flash News पत्रपत्रिकाबाट समाचार
काठमाडौं । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरीले अपशब्द बोलेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाले आपत्ति जनाएको छ । एक स्थानीय टेलिभिजनले कोरोना भाइरस फैलिन नदिनका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्य गरेको छ ? भनेर कुराकानी गर्न खोज्दा मेयर चौधरीले इन्कार गरेका छन् । त्यसक्रममा मेयर चौधरीले अपशब्द प्रयोग गरेका हुन् ।
स्टुडियोबाट प्रावधिकले मेयर चौधरीलाई फोन गर्छन् र आफू टेलिभिजनबाट भन्छन् । मेयर चौधरी ‘के रे’ भन्दै रुखो जवाफ फर्काउँछन् ।
प्रावधिकले फेरि टेलिभिजनबाट भन्छन् । त्यसपछि मेयर चौधरीले फोन राख मु..‍. भन्छन् । प्रावधिक हैन यो हाम्रो … भन्दै कुराकानी गर्नका लागि आग्रह गर्न खोज्छन् । मेयर चौधरी अश्लील शब्द – फोन राख तेरो बाउलाई फोन गर्छस मा…’ प्रयोग गर्छन् ।
इटहरीका मेयर चौधरी यसअघि पनि पत्रकारलाई लोपारिदिने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका व्यक्ति हुन् ।
पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर मेयर चौधरीबाट पटक-पटक प्रेस विरोधी दुर्व्यवहार हुँदै आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यस्ता कार्य नियन्त्रणगर्न समेत पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले माग गरेको छ ।
कोहलपुरमा माइक्रो बसले अटोलाई ठ’क्कर दिँदा अटो चालकको ज्यान गयो, तीनको अवस्था ग’म्भिर
March 12, 2020 Khabar Time
यस्तो छ होलीका दिन काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीको तयारी
March 9, 2020 Khabar Time
शःब बाहन खरिदका लागि जोईनट युथ हेण्ड सोसाइटी बुद्धशान्ति झापालाई एक लाख बढि सहयोग (भिडियो)
March 1, 2020 March 1, 2020 Khabar Time